हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला
राजनीति भन्ने जिनिस नै यस्तै । यही आडमा हिजो हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका र राजनीतिमा होमिएकाहरु आज अर्बौ सम्पत्तिका मालिक बन्न सफल भएका छन् । यस्ता पात्र र प्रवृत्ति राजनीतिमा धेरै देख्न पाइन्छ । तिनै मध्येका एक हुन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल । जो बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिए । तिनैलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि नेकपाकै नेताहरुलाई भ्याइ नभ्याई छ ।
अहिले चर्चा र बहसको बिषय बनिरहेको छ बालुवाटारको ‘आठ आना’ जग्गा । यो सरकारी जग्गा कीर्ते गरी पौडेलले आफ्ना पुत्र नविन पौडेलको नाममा पारिएको छ ।पचासका दशकसम्म सुकुम्वासी भनिएका विष्णु पौडेल एक दशकमा करोडपति र अर्कौ दशकमा अर्बौको सम्पति थुपारिसकेकका छन् । यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ? अरुलाई लाग्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा नेताहरुलाई चाहिँ लाग्ने कि नलाग्ने ? प्रंसग हो ०५२ सालको त्यो समयसम्म पौडेल सुकुम्वासी थिए वा रहेछन् । उनले त्यसबेला सुकुम्वासी आयोगमा आफुले दिएको निवेदन र सो अुनसार सुकुम्बासीका नाममा जग्गा प्राप्ती गरेको विवरण सरकारी निकायमा भेट्न पाइन्छ । सो समयमा उनले सुकुम्वासीका नाममा १८ धुर जमिन प्राप्त गरेका बिवरण उनकै गृहजिल्ला रुपन्देहीको मालपोत कार्यालयमा डढ्टा पल्टाउने हो भने भेटिन्छ ।
पौडेलले २०५२ साल असोज १९ गते वुटवलको दीपनगगरको कित्ता नम्वर २९ बाट १५ र कित्तानं ६४ बाट ३ गरी १८ धुर जमिन हातपारेका थिए । यो जमिन मूलराजमार्गभन्दा सयमिटरमात्र दूरीमा थियो । अर्थात उनले त्यसबेला राज्यको सुकुम्वासी नागरिक बनेर यो जमिन पाएका देखिन्छ । आज उनी करोडपति बनेका छन् । भैसेपाटीमा मात्र पौडेलको करोडौंको बंगला छ । झट्ट हेर्दा यो कुनै उद्योगी वा व्यापारीको झैं लाग्छ । करोडौं माथिको यो बंगलाले वप्रश्न उठाउँछ केही वर्ष अघिसम्म सुकुम्बासी रहेका पौडेल कसरी छोटो समयमै अर्वौका मालिक बने ? यसको छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने रु कर्मचारीको मात्र सम्पत्ति खोजविन हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर जेल जान्छन । के नेता हुँदा उनीहरुका जतिसुकै अनियमिततामा पनि सात खत माफ हुने हो ?
पौडेलको हैसियत भने सुकुम्वासी हुने थिएन । यतिबेला उनी आफै भनिरहेका छन् –स्याङजामा निकै राम्रो हैसियतको परिवार हो उनको । तर मनचाहिँ सुकुम्वासी भएछ र उनले त्यस्तो जमिन लिए र त्यसमा एकतले घर पनि बनाएका थिए । पछि बेचेको कुरा सार्वजनिक भयो । उनको त्यो घरजग्गा पवित्रा थापा नामगरेकी महिलाले खरिद गरेको कुरा रिपोर्ट सार्वजानिक भइसकेको छ । त्यो जग्गा पनि उनका छोराको नाममा थियो जो यतिबेला चर्चामा आएको बालुवाटारको आठ आनापनि छोराकै नाममा छ। इडेभ न्यूजबाट
नवराज विकको प्रेमिकाको घर मै पुगेर स्थानीयसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस, मिडियामा आएको भन्दा फरक कथा सुनाए स्थानीयले (घटनास्थलको दृश्यसहितको भिडियो)